AH: စိုင်ကော်လို့ ခြုံပေါ်ရောက်သွားတဲ့ လင်မယား
ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ ဒါကြီးရော ဒီမြေနဲ့ခြံကိုပါ ဘယ်သူမှ စိတ်ဝင်စားမယ်မထင်ပါဘူး။ အင်္ဂလန်က အဆိုပါလင်မယားဟာ ဒီစပါးကျီကြီးကို ပါ တစ်ဝက်ဈေးနဲ့ ဈေးဆစ်ပြီး ၀ယ်ယူခဲ့ပါတယ်။
သူမိန်းမရွှေ့လာပြီးတဲ့နောက် အဲ့ဒီ စပါးကျီကြီးကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ဘာများတွေ့တယ် ထင်ပါသလည်း။ ဟော့ဒီအောက်က ပုံတွေကို သာကြည့်ပါတော့။ ဒီလို အန်းတိတ်တွေကို ရောင်းရင် ဘယ်လောက်ရမလည်း မှန်းသာကြည့်။
ဒီသတင်းလေးကို Link ပို့ပေးတဲ့ ကျွန်တော့သူငယ်ချင်း ကိုမင်းသော်အား အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
ဒါလေးတွေးတော့ သူတို့ဆီမှာမှ ဒါမျိုးရှိတာလား... ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘောလုံး ဥက္ကဋ္ဌကြီး ဦးဇော်ဇော်ဆိုရင် လေးဘီးကားတွေ စုထားတာမှ တစ်ပုံကြီး ခုများ ရှားပါးပစ္စည်းဖြစ်နေလိုက်တာ ဋ္ဌာနဆိုင်ရာကား ရောင်းရန်မဟုတ်ဆိုပြီး ကားမှာ စာကပ်ထားရတဲ့ အဖြစ်ကို ရောက်လို့
Posted by AH at 10/04/2011 12:03:00 PM
TZH1985 October 4, 2011 at 3:49 PM
စံပယ်ချို October 4, 2011 at 4:41 PM
AH October 4, 2011 at 8:42 PM
ခုလေးဘီးတွေက ဈေးတွေ ထောင်တက်နေပြီခင်ဗျ... ၀ယ်ချင်လို့တောင် မရတော့ဘူး....ဒါလည်း ကောင်းပါတယ်လေ... ကားအသစ် တွေ မြင်ရတော့မှာပေါ့။
Rich people want to be richer.There's law of nature.Elephants eat elephant food and ants eat ant food.But elephants eat even ants food in our country now.They don't leave any food for ants and snails.....:(
mr1go2come October 11, 2011 at 10:28 PM
I like it . . . . cars . . . I want it .. . cars . . . . . . .